Iphupha ngeBhals ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi "ibhalsam" lisuka kolona lwimi lusetyenziswa kudala kwaye limele umxube wentlaka yomthi kunye neeoyile ezifanelekileyo, ezazisetyenziselwa ukhathalelo nokuphilisa ngaphambili. Namhlanje amagama athi "Amafutha" okanye "cream" asetyenziswa ngakumbi.
Ibhalsam ibonakala phantse kuphela njengegama "elinamaphiko" kwizaci ezinje "Amafutha omphefumlo". Kule meko, kubhekiswa kwiimpawu zokuphilisa ibhalsam. Okanye igama elithi "ibhalsam" linokufumaneka nakwindlela yakudala yokulondolozwa kwesidumbu, ekuthiwa kukuqhola isidumbu.
Igama elithi "ibhalsam" linokuchazwa njani njengomqondiso wephupha? Luluphi utoliko olukhoyo ekutolikeni kwamaphupha? Khumbula iphupha lakho kwaye unikele ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha ozibonileyo.
1 Uphawu lwephupha «Ibhalsam» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Ibhalsam» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Ibhalsam» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ibhalsam» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Uphawu lwephupha "Ibhalsam", kutoliko lweli phupha, luphawu oluthembisa kakhulu ukuphupha. Okokuqala, inokuthathelwa ingqalelo njenge Uphawu lwethamsanqa itolikwe. Ubomi bamaphupha budlula ngendlela kwaye bunokuqhubeka nokuba nexesha lokungakhathali.
Isimboli yephupha ikwanika uthsuphe kwelinye lamaphupha. imeko yezempilo ezinzileyo. Nangona kunjalo, okoko ulibonile uphawu lwephupha "Ibhalsam", kuya kufuneka uqhubeke nokuhoya umgaqo-siseko ukuze uwugcine. Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umntu ophuphayo kufuneka ajonge kwimali yakhe nakwishishini lemali ukuze aqhubele phambili ngempumelelo.
Amafutha ebhalsamu ephupheni axelela iphupha ukuba ngumgama omde wethamsanqa kwaye Izinzuzo qhubeka. Ukuba ukuphupha uthenga ibhalsam ngexesha lokulala, oku kunokuchazwa kutoliko jikelele lwephupha njengophawu lomntu ophuphayo ukuba acinge ngemeko yakhe yempilo kwaye, ukuba kukho imfuneko, afumane indlela yokuphila esempilweni.
Uphawu lwephupha «Ibhalsam» lukwaluphawu Intuthuzelo y Uncedo ukuphupha emva kweziganeko ezinzima okanye ezibuhlungu kwi el mundo yomlindo. Uthetha iilwimi zomthonyama ngelize "Amafutha omzimba nomphefumlo". Olu toliko lusebenza apha ekutolikeni kwamaphupha.
Uphawu lwephupha «Ibhalsam» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwephupha, uphawu lwephupha "ibhalsamu" ibonisa iphupha ukuba uyinxalenye yakhe. Uncedo o cura imfuneko. Kuya kufuneka ulazi eli nxalenye lehlabathi lokuvuka ukuze uphinde uchache.
Ukuba omnye umntu uthambisa ibhalsam enxebeni okanye eluswini ngelixa iphupha lilele, eli phupha likwabonisa ukuba umphefumlo wakhe uya kuba sempilweni. Ukuchacha kwakho kuya kuqhubeka ikakhulu ngenkxaso yoontanga bakho ebomini bokuvuka.
Ukuba iphupha lisebenzisa isimboli yephupha "ibhalsam" nayo ngelixa ilele, ukutolikwa kwengqondo yephupha kuyitolika njenge cura yamanxeba engqondo athi ngalo mzuzu aqhubeke nokulala kakhulu kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «Ibhalsam» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "Ibhalsam" ifuzisela a umnqweno wemvelo emva kokunyanga okanye ukukhathalela.